လက်ကားအိမ်သုံးကုတင်စက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူ JBH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
Hot Sell သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာပရိဘောဂခြောက်ခု Functions သစ်သားနောက်ဖောသူနာပြုကုတင်စီးပွားဖြစ်ပရိဘောဂလူနာဆေးရုံခေါက်ကုတင်
$ 646,00 - $ 675,00 / Piece | ၂၀ шт / အပိုင်းများ (အမိန့်။ )
၁ ။ poleသစ်သားခြမ်း panel ကို4"ဘရိတ်နှင့်အတူဘီး
အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့် 350-750 မီလီမီတာ
အရွယ်အစား 1900 (L) * 900 (W) မီလီမီတာ
Wood & သံမဏိကိုယ်ထည်
အလေးချိန်ပမာဏ ၁၈၂ ကီလိုဂရမ်
1. Back ကို function ကို
Back-up ထောင့်သည် ၀ မှ ၇၅ ဒီဂရီဖြစ်ပြီးနောက်ကျော၏နှေးကွေးသောမြင့်တက်မှုကိုသဘောပေါက်သည်။
လူနာသည် ၀၀ မှ ၉၀ ဒီဂရီမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထိုင်နိုင်သည်။ ထထိုင်ပြီးနောက်စားပွဲနှင့်အတူစားသောက်နိုင်သည်၊ ဖတ်ပြီးလေ့လာနိုင်သည်။ ဘက်စုံသုံးထမင်းစားစားပွဲကိုဖြုတ်။ တပ်။ မရဘဲအိပ်ရာအောက်၌ထားနိုင်သည်။ တစ်သျှူးကျုံ့ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဖောရောင်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်လူနာကိုမကြာခဏထိုင်ပါစေ။ ရွေ့လျားမှု၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအထောက်အကူပြု။ လူနာထိုင်ပြီးနောက်သူသည်အိပ်ရာခြေကိုဖယ်။ အိပ်ရာမှထွက်နိုင်သည်။
3. လျှောဆန့်ကျင် function ကို
ထိုင်ချိန်တွင်တင်ပါးဆုံများကမြှင့်တင်ထားသဖြင့်လူနာသည်တက်တက်ကြွကြွထိုင်။ ထိုင်။ ထိုင်ခြင်းမှထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။
4. ထိုင်နှင့်ဆီး function ကို
အဆိုပါ potty နှင့် potty baffle ပြောင်းရန်အတွက် potty လက်ကိုင်လှုပ်။ အဆိုပါ potty အရပျရှိပြီးနောက်, အစက်အပြောက်တက်အိပ်ရာထဲကထွက်ယိုခြင်းမှကာကွယ်ရန်အိပ်ရာမျက်နှာပြင်နှင့်နီးစပ်သောကြောင့်သူကအလိုအလျောက်မြင့်တက်။ ခုခံကာကွယ်သူသည်ဖြောင့်မတ်စွာထိုင်။ အ ၀ တ်လျှော်ရန်အိပ်ရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ အိမ်သာသုံးအိမ်သုံးအိပ်ရာခင်းသည်ရေရှည်အိပ်ရာမ ၀ င်သောလူနာများ၏ပြtoနာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ လူနာသည်ဆီးသွားရန်လိုအပ်သည့်အခါသုံးစွဲသူ၏တင်ပါးအောက်ရှိ potty ကိုသယ်ဆောင်ရန်နှင့်နောက်ကျော၊ ခြေထောက်နှင့်ခြေထောက်တို့၏ညှိနှိုင်းမှုကိုအသုံးပြုရန်အိမ်သာလက်ကိုင်ကိုနာရီလက်တံအတိုင်းလှုပ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်, လူနာဆီးနှင့်အရှိဆုံးသဘာဝကထိုင်လျက်အနေအထားတွင်အစက်အပြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးသွားခြင်းနှင့်အညစ်အကြေးပြီးနောက်အိမ်သာပန်းကန်ကိုအိပ်ရာပေါ်သို့ရွှေ့ရန်အိမ်သာလက်ကိုင်ကိုနာရီလက်ယာရစ်ပါ။ ၎င်းသည်လဲလျောင်းနေသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်သာသို့သွားသည်ဖြစ်စေလူနာသည်သက်သောင့်သက်သာမရှိသည့်ခံစားမှုမျိုးခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လျှပ်စစ် icu အိပ်ရာ
မသန်စွမ်းများအတွက်အပြည့်အဝလျှပ်စစ် Hopital အိပ်ရာ
တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာမျက်နှာဖုံးများ, လျှပ်စစ်လူနာ lifter, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချိန်ညှိအိပ်ရာ, လူနာတွေအတွက်ချိန်ညှိအိပ်ရာ, ဟိုက်ဒရောလစ်လူနာ lifter,
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာမျက်နှာဖုံးများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချိန်ညှိအိပ်ရာ, တစ်ခါသုံးမျက်နှာဖုံးများ, ဟိုက်ဒရောလစ်လူနာ lifter, လူနာတွေအတွက်ချိန်ညှိအိပ်ရာ, လျှပ်စစ်လူနာ lifter,